Halatra solika teto Toamasina
Olona 56 voasambotra, 16 no efa nidoboka ao Ambatavohangy ary karohina zanak’olom-panjakana ambony iray
Mitohy hatrany ny fanadihadiana mahakasika ny nahaverezan’ny solika teto Toamasina. Olona miisa 56 no voaroiroy ary 16 amin’ireo no nahiditra amponja vonjimaika. Anisan’ny raharaha mitovy amin’ny Trafic andramena ity halatra solika tao amin’ny Galana terminal ao D�pot - Toamasina ity. Araka ny vaovao voaray, nandritran’ny iray volana sy tapany no nanatanterahan’ny police ny fanadihadiana an’ireo olona ahiana amin’ity raharaha ity. Ao anatin’ny tambazotran’ny mpangalatra solika ireo olona voasambotra ireo amin’ny alalan’ny fantsona lehibe amin’orinasa Galana izay mitodra ny solika miainga avy any amin’ny sambo mankeny amin’ny foibe fiterizan-tsolika no anaovan’ireo mpangalatra ny asaratsiny. Raha ny fanazavan’ny police hatrany, zanak’olom-panjakana ambony iray karohan’ny police fa tafiditra ary anisan’ny atidoha mikotrika ity halatra solika ity. Raha ny tatitra avy amin’ny police hatrany, mitotaly 15000 litatra ny solika efa tafaverina amin’ny Galana terminal taorian’ny fisamboran’olona ireo.
(30) Lantomalala SAHONDRANIRINA : 10-04-2014 - 18:00